5 Tsika Iwe Unozoona chete paMuchato weUkraine
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » 5 Tsika Iwe Unozoona chete paMuchato weUkraine
Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa Ukraine Nhau • tsika nemagariro • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Michato yekuUkraine ine yakasarudzika tsika uye inowanzo kuyeukwa kwenguva refu. Havasi vese vachangobva kuchata vanoomerera kutsika dzechichato. Asi Muchato weUkraine tsika dzinowanzoitika pamichato. Zvimwe zvacho zvakasarudzika. Wakamboenda kumhemberero yakadai here? Kana zvisiri, unofanira kunyatsozviona nemaziso ako.
Vabereki vechidiki vanosangana nevachangoroora pamba nechingwa nemunyu. Iyi ndiyo tsika yekuropafadzwa kwehupenyu hwakareba hwemhuri. Kune chingwa chakakosha chemuchato - korowai chingwa chakabikwa, pakati pacho panodirwa munyu. Iyo yakashongedzwawo nenzira dzakasiyana siyana uye zvishongo. Korowai inofanirwa kunge iri pane yakakosha machira - rushnyk. Inowanzo chena uye yakashongedzwa nezvakarukwa. Vaya vachangobva kuchata vanopihwa korowai uye vechidiki vanofanirwa kutyora chidimbu chacho. Pane chiratidzo chine chidimbu chekorowai chakakura, munhu iyeye ndiye achave musoro wemhuri. Mushure meizvozvo, avo vachangobva kuchata vanofanirwa kuravira munyu, izvo zvinomiririra kuti vakagadzirira kuve pamwe chete mukutambudzika.
Ichi chiitiko chinotamisa moyo. Panguva imwecheteyo, murume achangobva kugadzirwa anobvisa chifukidziro kubva mumusoro wemusikana uye amai vake vanosunga sikafu pachinzvimbo chevhavha. Izvi zvinoratidza kuti atove mukadzi akaroorwa. Mushure meizvozvo mwenga anokoka mumwe weshamwari dzake dzisina kuroora kwaari uye anoedza chifukidziro paari. Panguva ino, vasikana vasara vanotyaira vakatenderedza yekutenderera yekutamba.
Pakangobviswa chifukidziro kubva kumusoro kwemwenga, inguva yekukanda maruva emwenga. Sekureva kwengano, chero munhu anobata maruva acharoora gore rinouya.
Chinja moto wemhuri
Vabereki vemwenga nemuroori vanobatidza makenduru uye vanopa moto kune vachangobva kuchata. Kakawanda, ivo vakakomberedza vashanyi uye hama. Izvi zvese zvinoperekedzwa nenziyo, kupatsanura mazwi evabereki, dzimwe nguva minamato. Kana makenduru evachangobva kuchata abatidzwa, kutaura kwevabereki kunonzi - vanogara patafura yavo, asi makenduru anopisa manheru ese. Hapana anodzima makenduru.
Zvichida imwe yemitambo inonakidza kwazvo. Kubva vachati vanofanira kurara mudzimba dzakasiyana muchato usati waitwa, kazhinji muroora anogara pamba pevabereki. Kunouya vaenzi vanobva kumuroora, muroora. Naizvozvo, vaenzi vanobva kuchikomba vanouya kumba kwake. Chikomba chisati chaona mwenga, uye ivo vachaenda kunyoreswa yemuchato - anogona kudzikinura mwenga. Kune izvi, vasikana havamutendese iye kana murume ari kuchata kumusuwo wemwenga. Vanoronga bvunzo dzakasiyana uye vanouya nemabasa anoda kupedzwa. kana chikomba chisingaite nebasa racho - anofanira kubhadhara. Inogona kunge iri mari, zvipo, nezvimwe.
Chaizvoizvo, ichi chiitiko chinonakidza uye chinonakidza.
Ichi ndicho chimwe chehukuru hunhu. Inoita basa remashiripiti. Kazhinji kazhinji inogadzirwa neshinda yechisikigo uye yakashongedzwa nemicheka yechinyakare. Kwenguva refu, musikana wacho aifanira kumusona. Iri ibasa rakareba uye rinotyisa. Akaunganidzawo roora, iro rinozotamisirwa kwaari kana kumurume wake mushure memuchato.
Iyo korowai inofanirwa kurara pane iyo rushnyk, iye anofanira kunge aripo pamhemberero yemuchato. Vabereki vevachangobva kuchata vanoisa rushnyk pamberi pavo kuchengetedza muchato. Pane chiratidzo chekuti chero anotanga kutsika pairi - ndiye achave mukuru mumhuri.
Muchato weUkraine unogara uripo yakawanda nziyo, kutamba, mimhanzi. Inotaridzika yakajeka. Kakawanda, muchato unotora mazuva akati wandei. Kazhinji, pazuva repiri, vaenzi vanoungana, vanopemberera uye vanoita mhemberero.